FSX Fomba famaritana voafaritra feno sy feno
fanontaniana FSX Fomba famaritana voafaritra feno sy feno
1 taona 4 andro lasa izay #980 by DRCW
Izany dia natolotry ny ESP izay namolavola ny rafitra FSX. Te hanondro ny tranonkala ianao ary manana kopia ao amin'ny taratasinao.
Amin'izao fampahalalana izao dia ny lanitra no tena fetran'ny fahafahanao manova ny fiaranao sy ny any aoriana.
1 taona 4 andro lasa izay #981 by Gh0stRider203
Oh, noho izany dia azoko atao ny manamboatra ny 777 miaraka amin'ireo mpikomy hafa? mamy! ^ _ ^ lol
1 taona 4 andro lasa izay #982 by Gh0stRider203
Izaho dia manana zavatra iray azonao atao mba hanampiana ahy amin'ny ....
Ahoana ny ambarako ao amin'ny efitrano fandefasana parking ho any amin'ny seranam-piaramanidina? Amin'ny ankapobeny, ny sasany ao amin'ny KDFW eo anoloan'ny American Airlines 'Maintenance Hangar #5 prnt.sc/ie8djp
1 taona 3 andro lasa izay - 1 taona 3 andro lasa izay #983 by DRCW
Io no faritra iray tsy dia nataoko loatra tao amin'ny FSX, amin'izao fotoana izao indrindra aho no mihazakazaka P3Dv4 izay efa nandrasan'ny 64 bit ESP platform. Ity misy lahatsary fampianarana izay hitako fa mety mety. Tsy mbola nanana fotoana hampiasana izany aho, fa amin'ireo horonantsary rehetra nodinihako, ity dia toa manazava tsara izany
Fanovana farany: 1 taona 3 andro lasa izay by DRCW.
1 taona 3 andro lasa izay #988 by DRCW
Ireto misy santionany ho anao amin'ny seripan'ny seripam-piaramanidina seripan'ny serivisy CFP
fuel_flow_gain = 0.002 // Zava-maneno ny solika
inlet_area = 19.6 // Square Feet, faritra môtô nakela
rated_N2_rpm = 29920 // RPM, tombo-kase faharoa mahazatra compressor
afterburner_available = 0 / / Afterburner available?
reverser_available = 1 // Mpanelanelana mivadika?
ThrustSpecificFuelConsumption = 0.385 // Fandefasana solika manokana (Jets)
AfterBurnThrustSpecificFuelConsumption = 0 // TSFC miaraka amin'ny fanonerana / fanonerana
Ny mpanafika dia tokony ho atao = 1) 0 dia midika hoe diso ary 1 dia midika marina, Mety tsy maintsy hampitombo ny môtera Static_ Thrust = koa ianao. Hanoratra lahatsoratra eo amin'ity lohahevitra ity aho atsy ho atsy.